Design kumele athobele umoya jikelele lesikhungo zasenkulisa ethola enkulisa. Ngokuqinisekile kudingeka ukusekela isitayela izingane zezwe, ephelele ifenisha izinto okuqonda zezingane zezwe, kodwa kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi siphila leminyaka ukuthuthukiswa esebenzayo elingaphakathi design kanye kudingeka sisuke Soviet eyeqisayo enkulisa nge imidwebo elikhanyayo ezindongeni.
Ngiyakunikela ngezinkunzi wena ukwenza yokubhalisa reception enkulisa usebenzisa nendwangu ngesimo band eqinile. Ngamanye amazwi - thunga panel isimiso amakhethini.
Ukwenza enkulisa reception
Izithombe esihlokweni kuzokusiza unqume phezu ongakhetha kunokwenzeka.
zonke izinto ezidingekayo womshini pelmet kanzima nezilenge;
ngokwemvelo kvalifirovannaya amapayipi kanye lamathuluzi (ngokuvamile enikeziwe in abasebenzi engadini ngamunye iyunithi ngokuthi "sasendlini");
izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba lokuthunga izesekeli umhlobiso.
Ukwenza reception enkulisa version yendwangu kungenziwa noma isiqondiso.
Iphaneli nge esikhulu sesihlahla impahla brown kwesakhiwo ngokumelene esiluhlaza. Kuye ithungwe ngokwehlukana ilanga elinemisebe futhi utshani obuluhlaza izimbali - ehlobo. Amafu crystal buhlalu line ukudoba, isiqu angenalutho ngezingcezwana zezinkwa amahlamvu aphuzi - ekwindla. Ebusika, ungakwazi ukuhlobisa isiqu uvolo, thunga pads ngesimo iqhwa phansi komuthi, engeza enkulu yendwangu Snowman ngokukhulu ukumamatheka. Futhi ake nembali entwasahlobo isihlahla ngemibala egqamile, okuyinto kungenziwa othathwe i isixha yokufakelwa.
Nezwe elimangalisayo ekujuleni kolwandle - amagobolondo, jellyfish, izinkalankala nezinhlanzi, yonke imibala ehlukene kanye indlela yokwenza, eziningi egeleza ngokukhululekile futhi ilenga izakhi, zonke ezokwenza sidonse amehlo izingane imininingwane emihle futhi zibonisa ezweni fantasies zezingane.
Ukwenza reception sabaqalayo ngesimo izigcawu kusuka opopayi
"Awu, awume kancane!", "Masha kanye Bear," "The Lion King" - izinhlamvu okuthandayo kusuka zezingane inganekwane.
Enkulisa umhlobiso (reception band)
Lapho abazali ukuza izingane zabo eqenjini, kubalulekile ukubonakalisa phambi kwamehlo abo umhlaba wonke futhi abhekisele esimweni esasivamile ezingokomoya leqembu. Umhlobiso iqembu eyamukelayo kumele senze umuzwa nokwethenjelwa onokuthula, uma ufuna abazali bakho bangase bakwethembe izingane zabo. Nalapha futhi, ungenza iphaneli kumnandi lapho, ngasendleleni, othisha bazokwazi ukusebenzisa izikhonkwane ukulungisa izikhangiso ezahlukene, izithombe, imidwebo yezingane.
Ake reception iyobe ehlotshisiwe kakhulu elikhanyayo imibala efudumele anemibala. Kungcono ziqondakala amathoni ezahlukene imibala eluhlaza nephuzi, njengoba kuba umbala ekuphileni, ilanga, oluhlaza, ukuvumelana. Batinikela amandla futhi kwehlise isimiso sezinzwa.
Ekuseni ingane bangena egumbini lokulinda, uthole ophethe ukuphakamisa ngokomzwelo, futhi ngaleyo ndlela ngeke kulingwa, njengoba kunjalo ngomklamo abomvu noma elikhanyayo umbala oluhlaza okwesibhakabhaka.
Emhlobisweni amaqembu lokulala
Uma ufisa ukukhipha lokulala e izindwangu, bese thunga panel esibonisa ezithambile izilwane kancane kanokusho ngamehlo avalekile. Yenza elithambile chiffon pelmet kusukela emoyeni, ukudala induduzo nokuzwana, balale. Ake uhlamvu ngeke esikhanya kakhulu, futhi izinto kuyoba onoboya like Kiddies ukubonisa ku ontofontofo futhi ngengubo efudumele.
Mayelana indawo eVorkuta kumephu Russia